वास्तु शास्त्र अनुसार पति पत्नीको कोठा कुन दिशामा हुनुपर्छ ? – Khabar Chautari
वास्तु शास्त्र अनुसार पति पत्नीको कोठा कुन दिशामा हुनुपर्छ ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष १५, २०७७ समय: १८:४१:०६
पाथीभरा माताको दर्शन गरि हेर्नुहोस् आज बि.स. २०७७ पुष १५ गते बुधबारको राशिफल !
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) कल्याणकारी तथा तारिफयोग्ग काम गरि चर्चामा आउन सकिनेछ । भाग्य तथा समयले साथ दिने हुँदा सानो प्रयत्नले ठूला कामहरु बन्नेछन् । धर्म तथा अध्यात्मिक क्षेत्रमा ध्यान जानेछ । दाजुभाइ तथा जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनेछ । लेखन कलाको माध्ययबाट आफ्ना विचारहरु मनमानसमा लैजान सकिनेछ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले वाहिरी वातावरण तथा सरसफाइमा ध्यान दिनुहोला